Kanjani izinyembezi amantombazane amaningi 'elichithwe kobuso equlekile "ikhaya we wesahlulelo" - izinsimbi. Bangaki amathemba asaneliswa, ngoba lo mbhangqwana "Kilos extra" akafuni ukushiya umzimba nesisindo akuyona zibuyele kokujwayelekile. Cabanga ukuphelelwa yithemba okubangelwa yilabo abangezona ambalwa Kilos owengeziwe futhi nedlanzana ezimbalwa? Udokotela uthi esasile, ukuthi isisindo somzimba akusona ngempela evamile. Futhi lokhu liyokhala kabi. Mayelana nalesi buhlungu aziwa labo abaye Skinny njalo.
Futhi ingabe sikhona ekahle isisindo emzimbeni? Yebo, kukhona, kodwa, njenganoma iyiphi Ngokwesilinganiso, ngempela kudingeka kucaciswe. Okungcono kakhulu, umuntu kufanele babe nesisindo amaphesenti ayishumi esingaphansi ifomula onqunyiwe Broca. Yebo, lokhu lapho ukukhula abalunyulwé 100 kuya 115. Isibonelo, uma ukuphakama kuyinto 174 cm, isisindo ovamile 74 kg, futhi ekahle - 66,6. Ungase uthi ukuthi lena akuyona namazinga imodeli? Futhi ukuthi udinga ukuvumelana!
Akubalulekile ukugxila ukubukeka onobuhle phezulu, zingabantu nokuphila okunzima kakhulu. Ukulondoloza leanness unikezwa kanzima, ngokuvamile amantombazane imodeli elihlanyiswa kwesisindo izihloko, ukuqina nendlala, inani leziguli ene-anorexia phakathi kwabo kayishumi ngaphezulu kwesilinganiso uyabazisa abesifazane fashion ibhizinisi. esisindo banayo namazinga aphansi kakhulu ebekiwe umkhawulo ephansi. Ngokuvamile, esekhala ukuzizwa ugula okuhlushwa esabekayo. Impumelelo emsebenzini bokusungula, ngokuba elambile, kunzima. Futhi hhayi ngoba ekuqaleni lezi amantombazane eziwubuwula, kodwa ngenxa yokuthi abanalo amandla ukufunda kanye self-ukuthuthukiswa.
Street-imodeli: Phakathi kuyinsakavukela
sibalo sabo ibe yisikhali Abaklami impumelelo, okuyinto ngokuvamile bazitike nge amazambane chips, ice cream nokunamanoni, futhi bheka okuqinile kakhulu. Ngakho emhlabeni nemfashini kungcono ukuba phakathi Abadali. Noma ukwakha izithombe ngokucace zezinto ngomumo eyenziwe. Ukuze uthole ukuthi uzimele imfashini Blogger, nje ukuma evamile ngokwanele, hhayi abantu abaphelele. Ngakho bangene blog fashion esingokoqobo hhayi izacile. Futhi ukuthandwa lokhu noma lokhuya ukushicilelwa ku-Inthanethi ingaphezu kwe umagazini othile, ekhomba imodeli. Ngakho-ke kulula ukuba abe imodeli emgwaqweni, uma une ukunambitheka.
Futhi iyini sibukeke evamile? Izinga yakamuva kakhulu - Coefficient ka isisindo somzimba, obizwa nangokuthi i-BMI. Ngokuvamile-ke kufanele kube kuka-19 no 25. By sibalo ekahle esiseduzane abanikazi BMI ngaphakathi 19-21. Ngakho uma uneminyaka engu-esingaphansi amathathu, into engcono uzoba bheka nge BMI esingaphansi 21. Uma ngikhuluma iqiniso, abesifazane abadala futhi zibukeke kangcono nge Inkomba ubuncane, kodwa lo mbono kunzima ukufeza ngeminyaka. Noma kunjalo, kunezizathu ezinhle, okuyinto namanje isisindo ongaphakeme, naphezu leyo minyaka emine. Isibonelo - Kemeron Dias, okuyinto Yisimanga ubuhle imilenze.
isisindo umzimba - ukubaluleka variable. Uma kahle ukwakha ubuhlobo bawo ukudla ukuqina, ngisho amashumi amakhilogremu ushiye. Izwe nemfashini, ungajoyina ngaphandle ukuhambisana namazinga anorexic. Wena ngokwakho kufanele baqonde lokho mass umzimba ubukeka umuhle futhi uzizwe ungumqemane. Futhi ukuthola kuphela umkhuba.
Ukuzila Ukudla ngosuku iphalishi: incazelo Ukudla kanye nokubuyekeza
Umthamo iseluleko ewusizo futhi ongakhetha
Ibhokisi tube e tube: Izinsiza ekwandiseni
IP - degree yokuvikela zikagesi